Poltava Medical & Dental Academy - International Munopinda Center
MSA sarudza isu
MSA chiitiko vakaziva
Mwanakomana Higher dzidzo
Visa mashoko mwanakomana
Ukrainian Medical & Dental Academy ndomumwe yakanakisisa
zvokurapa mumayunivhesiti muUkraine Europe vadzidzi vokune dzimwe nyika.
Ukrainian Medical & Dental Academy akakwana payunivhesiti Medicine yokudzidza / MBBS muUkraine
pamwe yakaderera muripo mari yechikoro
Poltava Ukrainian Medical & Stomatological Academy (Border kana mwanakomana),nderimwe remasangano uye kurapa mumayunivhesiti yaimbovapo USSR.
kubvira ipapo, pamusoro 40,000 zvikuru nenyanzvi vanachiremba, kuzivikanwa masayendisiti, vaongorori, utano basa varongi kubva kuUkraine, Rashiya, dzimwe nyika dzokuEurope, zvechiAsia, African uye American nyika kudzidza UMDA.
Sei kudzidza mushonga
Ukraine ane zvakawanda zvinobatsira wakanaka vadzidzi vokune dzimwe nyika. Kutanga kwazvose, Ukraine ane yakadereresa muripo yechikoro muEurope, asi hwaivapo dzidzo
UMSA ane nyore rubvumo muitiro vadzidzi vokune dzimwe nyika. Haufaniri zvakaitika bvunzo, IELTS kana TOEFL.
Rector kuti shoko
A yakanakisisa High chechetere nyanzvi varayiridzi, zvakanaka kukwanisa kudzidza kwakavakirwa uye kurapwa nezvigadziko, rakasiyana bhuku mari raibhurari yesayenzi, internet access, dzakasimukira kwezvivako Vadzidzi 'pazvivako Ndivanaani vanofarira zvakavanzika upenyu - awa kuwana Labs sayenzi, mukana kushanda nemamwe midziyo, mukana kudzidza ano tsvakurudzo michina. Tinodada redu nezvenhoroondo-gore 80, yunivhesiti yacho, vashandi vayo, avo varipo uye nezveramangwana kudzidza!
rubvumo 2016-2017 is open
Polatava ndiye rimwe remaguta akanaka kwazvo muUkraine. It rakamiswa pedyo Kyiv (wokuUkraine guta). Pano muchaona zvinoshamisa zvakasikwa uye akitekicha zvinoshamisa. Vanomira kwamuri Poltava!
Mashoko kubva vadzidzi
Ndinoda Poltava & ndinoda UMSA. Ndiri kufara kuva chikamu ichi zvinoshamisa vadzidzi nharaunda Poltava wokuUkraine Medical & Dental Academy. Heino zvizhinji vadzidzi kubva kwangu chizvarwa India uye ndainyaradzwa shamwari kubva kune dzimwe nyika
Ndaitya kudzidza kunze, asi zvino ndinofara chaizvo kuti ndiri muna UMSA zvino. Ndinoda yunivhesiti, guta, vadzidzi nevadzidzisi. Ndine nezivo yakawanda uye ndine chokwadi ramangwana rangu uchava wakajeka. Mazvita mwanakomana!
MSA Latest News
rubvumo 2016 – mumwe chitemamachira akasiya
Gunyana 2, 2016
36024, Ukireni, Poltava, Dzhafarova mumugwagwa,23
Sat - zuva : 9:00 AM - 2:00PM
Poltava Ukrainian Medical & Dental Academy ndiyo aitungamirira yunivhesiti zvokurapa muUkraine. Mazana vadzidzi vokune dzimwe auya pano kudzidza mushonga, Mbbs, chitoro chemishonga, ukoti uye dentistry ose gore.
nokunyora magwaro ikozvino